လူပျို သိုး မောင်ထူး – Hlataw.com
လူပျို သိုး မောင်ထူး
အိမ်ခြေပေါင်း ၅၀၀ လောက်ရှိသည့် အပူပိုင်းဒေသ အညာရွာလေးတစ်ရွာ။တစ်ရွာလုံး တောင်သူနှင့်လက်လုပ်လက်စားတွေ များသည်။ မတ်လအလယ်ပိုင်းလောက်ဖြစ်၍ အညာနွေက သိသိသာသာ ပူပြင်းလာသည်။ သည်အချိန်ရာသီမျိုးရောက်ပြီဆိုလျှင် တချို့က တောသို့ထွက်၍ ရွှေကျင်ကြ။အရှေ့တောသို့ထွက်ထင်းခုတ်ကြရ၏။ မောင်ထူးတစ်ယောက် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဖြေပြီးဖြစ်သဖြင့် လွတ်လပ်ခွင့်ရနေသည်။သူတို့က ယာမြေတွေဧကပေါင်းများစွာရှိသဖြင့် ကျေးလက် ဓနရှင်စာရင်းသူများပီပီ ရွှေတော၊အရှေ့တောနှင့်ပဌာန်းဆက် ကင်းဝေးသူများလည်း ဖြစ်သည်။တစ်ဦးတည်းသောသားလည်းဖြစ်၊စီးပွားဓနလည်း ချောင်လည်ကြသူများမို့ သားဖြစ်သူကို ခေတ်ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ကာ မြို့အရပ်မှာကြီးပွားချမ်းသာစေဖို့ ရည်မှန်း ထားကြသည်။မောင်ထူးက ရွာနှင့် ၄ မိုင်ခန့်ဝေးသောမြို့သို့ ဆိုင်ကယ်နှင့်ကျောင်းတက် သည်။အသက်ကလေးက ၁၅ နှစ်ကျော်၍ ၁၆ နှစ်ထဲဝင်လာပြီမို့ လူပျိုသွေးဝင် လာပြီ ဖြစ်၏။သူ့ပေါင်ကြားတွင် ပေါက်နေသော အမွှေးလေးမှာ အတော်လေးရှည်ကာ ရင့်သန် လာကြပြီ။လက်နှင့်ကမျင်းစပြုတတ်လာပြီဖြစ်၍ လထိပ်အရေဖျားလေးသည်ပင် အနည်းငယ်လန်စပြုနေပြီ။ သူ့အဖေနှင့်အမေတို့ တောသို့ကိုယ်တိုင်ထွက်ရသည့်တိုင် လမ်းညွန်ပေးရုံမျှသာဖြစ်သည်။သူ့အမေ၏မောင်ဖြစ်သူ ကျော်ထူးတို့လင်မယားက ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ပေး၏။သူတို့ကို လုပ်အားခသီးခြားမပေးတော့ပဲ မြေဧက ၁၀ ဧက အလကားလုပ်ခွင့်ပေးထားသည်။
ယခု သူ့အဖေနှင့် အမေတို့ တောသို့သွားခိုက် တစ်ဦးတည်း သော သားဖြစ်သူ ကျောင်းသားမောင်ထူးတယောက် အိမ်တွင်တယောက်တည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။လူပျိုပေါက်ကလေးပီပီ တဏှာရာဂ ဖိုမကိစ္စတွေကို စိတ်ဝင်စားတတ် လာပြီ။အပြာကားအပြင် အပြာစာအုပ်တွေလည်း လေးငါးဆယ်အုပ်ခန့် ဖတ်ဖူးထား သည်။အပြာကားထက် အပြာစာအုပ်ကိုပိုသဘောကျ၏။စာအုပ်လေး တငြိမ့်ငြိမ့်နှင့် အရသာတွေ့သည်။ မနေ့က မြို့ထဲကသူငယ်ချင်းဆီက အပြာစာအုပ် ၁၅ စာအုပ်ငှား လာသည်။သူယခုဖတ်နေသည့် အပြာစာအုပ်က အကိုဖြစ်သူ၏မိန်းမနှင့် ညီတို့၏ နှစ်ပါးသွားကြာခိုဇတ်လမ်းဖြစ်ရာ သူ့ကိုအလွန်ဆွဲဆောင်နေသည်။ညီဖြစ်သူက သူ့အကို မိန်းမကို နွားစာတဲထဲ ဖင်ဆော်နေပုံက သူ့မျက်စိထဲ အကွင်းလိုက် အကွက်လိုက် မြင်ယောင်လာ၏။စာအုပ်ကို ခေတ္တပိတ်ရင်း မျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်သည်။ပုဆိုးတွင်း တောင်မတ်နေသော သူ့လီးတန်ကြီးကို လက်နှင့်အသာဆုပ်ထားလိုက်သည်။ ဂွင်းမတိုက်မိအောင် အတော်လေးချုပ်တည်းထားရ၏။အာရုံပြောင်းသွားစေရန် အပြင် ဘက်ကို သေးပေါက်ထွက်ခဲ့သည်။အိမ်နောက်ဖေးရှိ အိမ်သာဘေးတွင် ပုဆိုးကို ပင့်လှန်ပြီး တရွှီးရွှီး တရှဲရှဲနှင့်ပေါက်နေရာ တော်တော်နှင့် မပြီးတော့။ ထိုစဉ် တဖက်ခြံဝိုင်းရှိ နောက်ဖေးအိမ်သာထဲတွင် မတင်ရီတစ်ယောက် အိမ်သာတက်ပြီး အပြင်သို့ထွက်ရန်ဟန်ပြင်နေစဖြစ်သည်။ တရှဲရှဲအသံကြောင့် မထွက်သေးဘဲ အိမ်သာထဲမှနေ၍ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။
အိမ်သာနှစ်လုံးက ခြံစည်းရိုးသာခြားနေ၍နီးနီးကလေးဖြစ်သည်။မောင်ထူး တစ်ယောက်ပုဆိုးကိုအသားကုန်ပင့်လှန်ပြီး သူမဖက်တဲ့တဲ့ကြီးလှည့်ပြီး သေးပေါက်နေ သည်ကို အထင်းသား အရှင်းသား မြင်နေရလေသည်။ သည်ထက် အံ့သြစရာကောင်းတာက ပေါင်ကြားထဲက လီးကြီးဖြစ်၏။ သူမမျက်စိအောက်တွင် ကြီးပြင်းလာသည့် သားအရွယ်ကောင်လေးမို့ ဘယ်လိုမှ ထူးထူးခြားခြားမအောင့်မေ့မိခဲ့ပါ။သူ့သမီးနှင့်လည်း ရွယ်တူမျှသာဖြစ်သည်။ အခု မတင်ရီမျက်လုံးဖြင့် တပ်အပ်ထင်ထင်မြင်နေရသော မောင်ထူး ပေါင်ကြားရှိ လီးတန်ကြီးမှာ သူ့ယောကျာ်းလီးထက်ပင် ၂ ဆလောက်ကြီးနေသည်။ လီးတန်ကြီးက နုထွားလွန်းလှသည်။ယှက်သမ်းနေသော သွေးကြောကြီးတွေက ဖုဖေါင်းတင်းကြွနေ၏။အရှည်ကို ခန့်မှန်းကြည့်ရာ အမလေး ရှစ်လက်မနီးပါးခန့် ပါလား ဟု စိတ်ထဲကတွေးမိ၏။လုံးပတ်အတုတ်ကမူ သူမအမြဲသောက်နေသည့် ရုပ်ပျိုဆေးဗူး ထက်ယောင်ယောင်လေးမှသာ ငယ်လေသည်။ မတင်ရီတစ်ယောက် မောင်ထူးလီးကြီး ကို ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း စောက်ဖုတ်ထဲ လှိုက်ကနဲ လှိုက်ကနဲ ကြွကြွယားတက်၍ လာလေသည်။ ရမ္မက်သွေးအဟုန်ကြောင့် စောက်ဖုတ်အုံကြီးတစ်ခုလုံး ဖေါင်းဖေါင်းမို့မို့ ကြီးဖြစ်လာ၏။ဒုတ်နှင့်အတို့ခံလိုက်ရသော ဂုံညင်းဖားကြီး မာန်ဖီလာသလိုမျိုးဖြစ်သည်။ သေးပေါက်ပြီးသွားသော်လည်း မောင်ထူးက ထမသွားသေး။သူ့လီးကိုအသေအချာ ငုံ့ကြည့်ကာ အရေပြားကိုဖြဲလိုက်၏။လူပျိုပေါက်တယောက်၏နုနုထွတ်ထွတ်လီးကြီး မို့လားမသိ။ဒစ်ဆံပြဲပြဲကြီးမှာ အနီရင့်ရောင် သမ်းနေသည်။လေးငါးချက်ခန့် ဂွင်းတိုက် သလိုလုပ်ပြီး ပုဆိုးနှင့်ဖုံးကာ အိမ်ဖက်သို့ပြန်သွား၏။လရေထွက်သည် အထိ ပြီးအောင် မတိုက်ဘဲ ချုပ်တီးနိုင်စွမ်းရှိသည်ကို မတင်ရီတအံ့တသြဖြစ်မိသည်။
မတင်ရီအရွယ်က မောင်ထူးအမေနှင့် မတိမ်းမယိမ်းမို့ သွေးသားဆူဖြိုး ကာမဓာတ်အားတွေ အစွမ်းကုန်ပြည့်ဖြိုးနေသောအချိန်ဖြစ်သည်။ယောကျာ်းနှင့် ကင်းကွာခဲ့သည်မှာတပတ်ခန့်ရှိပြီမို့ သူမ၏ကာမတဏှာ အဆာဓာတ်က အလွန်အမင်း ပြင်းပြင်းပျပျ ရှိလှသည်။ သူမယောက်ျားက အရောင်းအဝယ်ကိစ္စနှင့် ကောလင်း ဝန်းသို ဖက်သို့ခရီးထွက်သွားသည်မှာ တပတ်ခန့်ရှိပြီ။တခါထွက်လျှင် တလ တလခွဲကြာတတ် သဖြင့် တော်တော်နှင့်ပြန်လာမည် မဟုတ်သေး။ လီးအကြောင်း လီးအရသာကို ကောင်းကောင်းကြီး သိဖူးထားရုံမျှမက ပင်ကိုယ်ကပင် တဏှာရာဂဓာတ်ခံအားကြီးလှသူပီပီ လီးနှင့်ကင်းပြတ်လျှင် မနေတတ် မထိုင်တတ်ဖြစ်ရကား အခုသူမအလွန်နှစ်သက်တပ်မက်လှသော ဓာတ်စာကို မြင်တွေ့ လိုက်ရသောအခါ မတင်ရီတစ်ယောက် ဂဏာမငြိမ် ယောက်ယက်ခတ် သွားပါတော့သည်။ ကာမတဏှာဓာတ်ဟူသည် ဆင်ခြင်တုံတရားကို လွှမ်းမိုးဖိစီးနိုင်၏။ ထိုတဏှာဓာတ်ပြင်းထန်လေ မောဟအမှောင်ဓာတ်က အားကြီးလေလေဖြစ်တတ်သည် အရူးတကာ့အရူးတွင် တဏှာရာဂအရူးက ပို၍ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်း၏။ အရှက် အကြောက်တရားတွေကို လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားစေသည်။
အိမ်မှာ မောင်ထူးတစ်ယောက်ထဲ ရှိပုံရ၏။ထို့ကြောင့်သာ သူ့လီးကို ကမျင်းကြောထရဲခြင်းဖြစ်မည်။သူ့အဖေနှင့်အမေတို့မှာ တောင်သူငမ်းသတ်နေချိန်မို့ အခုရက်ပိုင်း အမြဲတမ်းလိုလို မိုးချုပ်မှပြန်လာတတ်ကြ၏။ မတင်ရီတို့နှင့် မောင်ထူးမိဘတွေက မေးထူးခေါ်ပြောလောက်သာရှိ၏။ သိပ်ပြီး ဟက်ဟက်ပက်ပက် မရင်းနှီးကြ။သူမယောက်ျားက ဒီရွာသားမဟုတ်။စီးပွါးရေး ကလည်း ကောင်းသဖြင့် ဘဝင်မြင့်အောက်ခြေလွတ်ချင်သည်။ရွှေတွဲလွဲ ငွေတွဲလွဲ ဝတ်နိုင်စားနိုင်သော မတင်ရီအဖို့လည်း သူမယောကျာ်းနည်းတူ ဘဝင်မြင့်အောက်ခြေ လွတ်၏။သို့သော် သူတို့စီးပွါးရေးအခြေအနေက မောင်ထူးတို့ကို မမှီပါ။ဆင်နှင့်ကြောင် လောက်ကွာသည်။ထို့ကြောင့်လည်း မနာလို ဝန်တိုဖြစ်ကာ ပို၍ဆက်ဆံရေး ကျဲခဲ့၏။ အခု မတင်ရီတစ်ယောက် ကာမတဏှာ၏ သွေးဆောင်မှုကြောင့် ပြိုင်ဖက်ဖြစ်သော မောင်ထူးထံသို့ မာန်ချ၍သွားရပေတော့မည်။သည်လီးကြီးကိုမှ အလိုးမခံရလျှင် စိတ္တဇဖြစ်ပြီး သေသွားနိုင်သည်။
မတင်ရီတစ်ယောက် အိမ်သာပေါ်ပြန်ထိုင်ပြီး ထမီကိုလှန်ကာ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဆပ်ပြာအကောင်းစားနှင့် အထပ်ထပ်အခါခါဆေးကြော၍ သန့်စင်လိုက်လေသည်။ စောက်ဖုတ်အကြိုအကြားနှင့်ဖင်ကြားပါမကျန် စိတ်တိုင်းကျ ဆေးကြောသန့်စင်ပြီးမှ အိမ်သာထဲက ထွက်ခဲ့၏။ အပေါ်ထပ် ကပျာကယာတက်ပြီး အကျီလဲသည်။အတွင်းခံ မဝတ်ဘဲ ခရမ်းနုရောင် ဇာအကျီခါးတိုလက်ပြတ်ဝတ်သည်။သူမ၏ဖြူဝင်းသော အသားအရေနှင့် ခရမ်းနုရောင်ဇာအကျီက လိုက်ဖက်လှသည်။ထို့အပြင် ဖြူဖြူဝင်းဝင်းတင်းတင်း မို့မို့ရှိလှသော ရင်သားဆိုင်တွေကိုပါ ရိုးတိုးရိပ်တိတ် မြင်တွေ့စေရန်ဖြစ်၏။ထမီက နက်ပြာရောင် အကျီကလည်း ခါးတိုဖြစ်သဖြင့် အကုန်းအကွတွင် သူမ၏ ဗိုက်ပြင်သား ဖွေးဖွေးကို ပို၍ပေါ်လွင်စေရန်သည်အရောင်များကို တမင်ရွေးဝတ်လိုက်၏။ ခက်သည်က တအိမ်နှင့်တအိမ် အကူအသမ်းသိပ်မရှိလှသဖြင့် မောင်ထူးတို့ခြံထဲဝင်ရန် ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်ရှာရမှန်းမသိ ဖြစ်လို့နေသည်။
ထိုစဉ် အိမ်တွင်မွေးထားသော ကြောင်မလေးက မတင်ရီကို ပွတ်သီးပွတ်သပ်လာလုပ်နေသည် မတင်ရီခေါင်းထဲအကြံတခု လက်ကနဲပေါ်သွား၏။ မတင်ရီက ကြောင်ကိုပွေ့ချီရင်း ငါးကြော်တစ်ခုကို ကြောင်နှာခေါင်း နားတို့ပေးလိုက်လေသည်။ကြောင်က စားမည့်ဟန်ပြုသောအခါ လက်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက် သည်။ပြီးတော့ အိမ်သာဖက်ထွက်ခဲ့သည်။ငါးကြော်တစ်ကို ကြောင်နှာခေါင်းနားတေ့ပြီး မောင်ထူးတို့ခြံဖက်လွှင့်ပစ်လိုက်သည်။သူ့သခင်လုပ်သမျှကို ကြောင်ကကြည့်နေ၏။ ပြီးတော့မှ အောက်ချပေးလိုက်သည်။သည်တော့ ပူစီမက ခြံစည်းရိုးကိုတိုးဝင်၍ ငါးကြော်ကို တချက်နမ်းလိုက်ပြီး အငမ်းမရ ကိုက်စားနေစဉ် ………… “…မြည်….မြည်….မြည်…မြည်….မြည်….ပူစီမ….လာ ..လာ… မြည်. မြည်…” အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် ကြောင်ကိုအော်ခေါ်၏။ငါးကြော်တစ်က ကြီးလွန်းသဖြင့် ပူစီမက မတင်ရီခေါ်သည်ကို လုံးဝဂရုမစိုက်။ “….မြည်….မြည်….ပူစီမ….လာ …လာ…လာ…” မောင်ထူးတစ်ယောက် အပြာစာအုပ်ထဲနစ်မြောနေစဉ် မတင်ရီ၏ကျယ် လောင်ကျယ်လောင်အသံကြောင့် ဖတ်လက်စစာအုပ်ကို ပိတ်ထားလိုက်သည်။
“….မောင်ထူးရေ…. ဟေ့….မောင်ထူး….” “….ဗျား ….ရှိတယ်ဗျို့…” မောင်ထူးက အခန်းထဲမှလှမ်းအသံပြုသည်။ “….မင်းတို့ခြံဖက်….ကြောင်ဝင်သွားလို့ လာဖမ်းချင်လို့ဟေ့….” “….အော် ….ဟုတ် …ဟုတ်…လာခဲ့လေ…” မတင်ရီက လူတကိုယ်စာဝင်သည့်နေရာက တိုးဝင်လာခဲ့၏။မောင်ထူးလည်း အခန်းထဲမှ အထွက် မတင်ရီကလည်း ခြံစည်းရိုးကအတိုး ဆုံနေ၏။အဝေရာကိုင်းနှင့်ညှိပြီး မတင်ရီ၏ အပေါ်အကျီင်္နှိပ်သီးတလုံး ပြုတ်ထွက်သွားသည်။မတင်ရီက မသိချင်ယောင် ဆောင်ကာ ပြန်မတပ်တော့ဘဲ သည်အတိုင်း ဖာသီဖာသာထားလိုက်၏။ “….မြည်….မြည်….ပူစီမ….လာ…လာ….” မတင်ရီက ရှေ့သို့တိုးလာရင်း ခေါ်သည်။မောင်ထူးကလည်း ကူခေါ်ပေးသည်။ မောင်ထူးက လူစိမ်းမို့ ပူစီမကငါးကြော်ကိုချီပြီး မောင်ထူးတို့အိမ်အောက်ဖက်ဆီသို့ ပြေးပါတော့သည်။မတင်ရီကလည်း ထမီိကိုတိုတိုပြင်ဝတ်၍ ပြေးလိုက်သည်။ အတော်လိမ္မာသည့် ကြောင်ဟုခေါ်မည်လားမသိ သတ္တဝါက ငါးကြော်ကိုချီပြီး မောင်ထူး စာဖတ်နေသောအခန်းထဲသို့ တန်းတန်းကြီးပြေးပါတော့သည်။ခါတိုင်း အတော် လိမ္မာသည့် ကြောင်မလေးဖြစ်သည်။မတင်ရီ၏အသဲစွဲ အချစ်တော်။ တောသူမတယောက်အနေနှင့် ကြောင်၏အရေးပါပုံကို မတင်ရီ ရှေးယခင်က မသိခဲ့ပါ။သူ့ယောကျာ်းနှင့်ပက်သက်ပြီး မန္တလေးစိန်ပန်းရပ်က မိန်းမတော်တော် များများနှင့်အဖွဲ့ကျကာ ခင်မင်ရင်းနှီးနေ၏။တခါကလဲ အလုပ်နှင့်ပက်သက်ပြီး ၂ ည ၃ ည အိပ်ဖြစ်ခဲ့၏။တော်တော်ရင်းနှီးလာတော့ ယောက်ျားတွေမသိစေချင်သည့် အတွင်းရေးတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလာကြသည်။သင်္ဘောသားမိန်းမ တယောက်က ပြောသည်။
သူမယောကျာ်းမရှိခိုက် ခံချင်လွန်း၍ မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင် ဖြစ်လာပြီ ဆိုလျှင် စောက်ဖုတ်ထဲ နို့ဆီများများထဲ့ပြီး အိမ်မှာမွေးထားသည့်ကြောင်ကို ယက်ခိုင်း ကြောင်း။လီးနှင့်အလိုးခံရသည်ထက် ဖီလင်ရှိပြီး အလွန်ကောင်းကြောင်း။၃-၄ ချီအထိ ပင် ကာမဆန္ဒတွေပြည့်ဝပြီးဆုံးကြောင်း ပြောပြသည်။ ထိုစဉ်မှစ၍ မတင်ရီတယောက် ကြောင်မလေးတကောင်မွေးထားပြီး စောက်ဖုတ်ထဲနို့ဆီထည့်ကာ ယက်ခိုင်းပါတော့သည်။ကောင်းချက်ကတော့ ဆွေမျိုးမေ့ မတတ်ပင်။ကြောင်ယက်တာလည်း ကောင်းပါ၏။နှစ်ပေါင်းများစွာ ယောကျာ်းနှင့် ကင်းကွာနေသော အကျဉ်းသူမိန်းမတွေ၏အတွင်းရေးကာမဗျူဟာနည်းက ယခုလို လွတ်လပ်သောပြင်ပနေရာမျိုးမှာ လီးစစ်စစ်ကိုပဲအားရပါးရ ခံလိုက်ချင်သည်။ သို့သော် ကြောင်ကိုယက်ခိုင်းသောနည်းက နောက်မီးလင်း လင်ငယ်နေတာထက် အန္တရာယ်ကင်း၏။သုတ်ရေတွေထွက်သွားခြင်းသည်ပင် ကာမဆန္ဒပြည့်ဝပြီးဆုံးခြင်းဖြစ်ရာ ကောင်းလည်းကောင်း အန္တရာယ်လည်းကင်းသမို့ မတင်ရီအမြဲလိုလို ပြုလုပ်နေကျ။ပူစီမကိုယက်ခိုင်းရလွန်း၍ လျှာရော စောက်ဖုတ်ပါ ပါးလှပ်ကုန်လောက်ပြီ။မည်သည့်အရာမဆို ရေရှည်ပြုလုပ်ပါများလျှင် ရိုးအီသွားတတ် စမြဲဖြစ်၏။ပြီးတော့ ကောင်လေးမှာ ထူးထူးခြားခြားလီးတောင်နေသည်။ အကြောင်းမဲ့သက်သက် တောင်တာတော့ ဟုတ်ပုံမရ။အကြောင်း တခုခုရှိ၍သာ ဒီလောက်မီးကုန်ယမ်းကုန် တောင်မတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ မတင်ရီစိတ်ထဲ အသိတချက်လင်ကနဲပွင့်သွား၏။ဒီအရွယ်ဆိုတာ တဏှာရူးကြောထစအရွယ်။မိန်းမများနှင့်ပက်သက်သည့် တဏှာရာဂစကားတွေကို အလွန်အကြားချင်ဆုံးအရွယ်။ရမ္မက်သွေး ထကြွလွယ်သည့်အရွယ်ဖြစ်၏။ ဧကန္တအပြာစာအုပ်ဖတ်ပြီး စိတ်တွေထကြွနေခြင်းဖြစ်ပုံရသည်။
မတင်ရီက ပူစီမကိုဖမ်းရန် မောင်ထူးထက်ဦးစွာအခန်းထဲသို့ ဝင်လာခဲ့သူဖြစ်၏။မိန်းမနှင့် ယောက်ျားပွေ့ဖက်နေသော အဝါနုရောင်စာအုပ်လေး ၃ အုပ် ခေါင်းအုံးဘေးတွင် ထပ်လျက်သားတွေ့ရသည်။ထို့အပြင် ဖတ်လက်စနေရာကို မှတ်၍မှောက်ထားသော စာအုပ်တအုပ်လည်း တဖက်ဘေးတွင် တွေ့ရသည်။မတင်ရီအတွေး သေချာသွား၏။ မောင်ထူးတယောက် အပြာစာအုပ်တွေဖတ်ပြီး လီးတောင်နေသည်။ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ပြီး အံတိုအံခွက်နေသော မတင်ရီလိုမိန်းမ တယောက် တွေးရင်အလွန်လွဲခဲသည်။သည်လိုဆိုလျှင် သူ့ရမ္မက်ထောင်ချောက်ထဲ မောင်ထူးတယောက် သေချာပေါက်ဝင်ရမည်ဟု အပိုင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ကျေနပ်စွာ ပြုံးလိုက်၏။ မည်သည့်စကားကိုမှ ပြောချိန်မရလောက်အောင် အဖြစ်အပျက်က မြန်ဆန်လွန်းလှ၏။မတင်ရီတယောက် ဒူးခေါင်းလောက်ထိရောက်အောင် ထမီတိုတို ဝတ်လျှက် အကျီင်္ရင်ဘတ်နှိပ်သီးတလုံးပြုတ်နေသည်ကိုပင် သတိမထားမိလောက် အောင် ကြောင်ဖမ်းချင်ဇောထက်သန်နေသည်။
အပြေးတပိုင်းနှင့်သွားရသည်မို့ သူမ၏ ပြည့်ဖြိုးလွန်းလှသော တင်ဆုံတင်းတင်းအိအိကြီးတွေက စည်းချက်ညီစွာ ထက်အောက် လှုပ်ရမ်းနေသည်။ ပြီးတော့ ပြုတ်ထွက်သွားသော နှိပ်သီးနေရာကစေ့မနေဘဲ သိသိသာသာကြီးဟနေသဖြင့် တင်းရင်းဝင်းအိမို့မောက်နေသော ရင်ညွန့်သားကြီး နှစ်မွှာက မောင်ထူးစိတ်ကို ပြင်းထန်စွာ လှုပ်ဆွသွားသည်။ နို့အုံကြီးနှစ်လုံးကို ဇာအကျီပါးကို အတင်းရုန်းကန်ဖောက်ထွက်မည့် အသွင်ကို ဆောင်နေ၏။အတွင်းခံ ဘော်လီဝတ်မထားကြောင်းကို သိသိသာသာ စူထွက်နေသော နို့သီးခေါင်းနှစ်လုံးက သက်သေခံနေ၏။ ဈာန်ရ ရသေ့တောင် သည်းခံနိုင်စွမ်းမရှိသော သည်မြင်ကွင်းကြီးကို လူပျိုသိုးပေါက်စ မောင်ထူးတယောက် အဘယ်မှာလျှင်ခံနိုင်ရည်ရှိပါမည်နည်း။ စိတ်အလိုကိုလိုက်၍ ထင်တိုင်းကျဲပစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာကို အရသာခံပြီး စိတ်ကူးယဉ်ထကြွနေမည့်အစား သူ့မျက်မှောက် ရှေ့တွင် တဲ့တဲ့ကြီး တိုးဝင်ရောက်ချလာသော ကာမအဆီတုံးအဆီခဲကြီးကို တဝကြီး စားသုံးပစ်တော့မည်။
ကာမအကြော ကာမအထာကို ခေါက်ရိုးကျေသည်အထိ ကျွမ်းကျင် သိရှိထားပြီးသော တဏှာရာဂအလွန်ပြင်းထန်သည့် မိန်းမတယောက်နှင့်ဣတ္ထိယ အတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိ။ရာဂစိတ်တွေအလွန်ထက်သန်ထကြွနေသည့် လူပျိုသိုးပေါက်စ တို့၏ တွေ့ဆုံခန်းကား ကြောက်ခမန်းလိလိ သဲထိတ်ရင်ဖိုဖွယ် ကောင်းလွန်းလှသည်။ မတင်ရီက ခုတင်အောက်ဝင်ပြေးသော ပူစီမကို ဖမ်းရန် ခုတင်အောက် သို့လက်ထောက်ငုံ့ဝင်လိုက်သည်။တကိုယ်လုံးမဝင်ဘဲ ကျောလည်လောက်ထိသာ ခုတင်အောက်ရောက်နေသည်။မတင်ရီ၏ တတောင်နှစ်ဖက်က ကြမ်းပေါ်ထောက်ပြီး ခါးကိုပြေလျော့ညွှတ်နွဲ့၍ ကုန်းနေသည်ဖြစ်ရာ ဖင်ဆုံအိုးထွားထွားကြီးကအထက်သို့ စွင့်ကားမြောက်တက်နေ၏။ မောင်ထူးတယောက် သည်မြင်ကွင်းကြီးကို ကြည့်ပြီး ဘဝင်တွေ ဆူပြီး ရင်တွေပူကာ အာခေါင်တွေခြောက်ကပ်လာသည်။တကိုယ်လုံးလည်း ရမ္မက်သွေး တွေလှိုက်ဆူတက်လာပြီး နောက်ကနေ ကြုံးလိုးပြစ်ရန် ပိုင်ပိုင်ကြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်သည်။
“ မြည်….မြည်…မြည်….ပူစီမ…လာ…လာ..မေမေ့…ဆီလာ…မြည်..မြည်..” ကြောင်ကိုချော့မော့ခေါ်ရင်း မတင်ရီခန္ဓာကိုယ်က မသိမသာလှုပ်ရှားနေ၏။ ရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်နေ၏။သည်တော့ စွင့်မြောက်ကော့ပျံနေသော ဖင်ဆုံကြီးနှစ်လုံး က အတက်အကျ အယိမ်းအနွဲ့ အတုန်အခါ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေက မောင်ထူး၏ရမ္မက်မီး ကို အရှိန်ကြီးသထက်ကြီးထွားလာစေရန် ပင့်ပေးသလိုဖြစ်နေ၏။ မိန်းမအတွေ့အကြုံ လုံးဝ လုံးဝမရှိသေးသော တကယ့်အစိမ်း သက်သက် လူပျိုသိုးလေးမို့ အမေနှင့်မတိမ်းမယိမ်းအရွယ်ရှိ မိန်းမတယောက်ကို ကာမဆက်ဆံရမှာ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားရပြန်၏။ သို့သော် လျှပ်တပြက်အတွင်းမှာပင် သူ့ဆန္ဒရာဂစိတ်ထဲမှာ အားသစ် အင်သစ်တွေ ဝင်ရောက်လာပြန်၏။မတင်ရီ၏အခြေအနေကို အထပ်ထပ်ဆင်ခြင် သုံးသပ်ကြည့်သောအခါ သံသယစိတ် ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေ အဖတ်လိုက်ကွာကျ ကုန်တော့သည်။ ဤအချက်က စာဖတ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။ကောင်းသည် မကောင်းသည်အပထား စာဖတ်သူက မဖတ်သူထက်တပန်းသာသည်။
မိမိကိုယ်တိုင် အလုံးစုံမသိနိုင်သော ဗဟုသုတများကို စာပေကတဆင့်သိရ၏။ စာမျိုးစုံဖတ်လေ အသိမျိုးစုံကြွယ်ဝလေဖြစ်သည်။မောင်ထူး လူငယ်သလောက် တွေးခေါ်တတ်သော ပါရမီဗီဇရှိသည်။ထိုအတွေးက တဒင်္ဂအတွင်းဝင်ရောက်လာသော ကြောက်စိတ်ကို အဝေးသို့ထွက်ပြေးစေပါသည်။အိမ်ချင်းကပ်လျက် ဖြစ်သော်လည်း မတင်ရီတို့နှင့် သူတို့မှာ မေးထူးခေါ်ပြော ခပ်စိမ်းစိမ်း ခပ်ပါးပါးသာ ဆက်ဆံလေ့ရှိသည်။ ထို့ပြင် ဘဝင်မြင့် မာနကြီးသော မတင်ရီတယောက် မောင်ထူး သက်တမ်းတလျှောက်လုံး သူတို့အိမ်ဖက်သို့ကူးလာသည်ကို မတွေ့ဖူးသေး။ယခုမှ ထူးထူးဆန်းဆန်း ကူးလာခဲ့သည်။သူ့အိမ်မှာ မွေးထားသည့် ကြောင်ကလည်း ဘယ်တုန်းကမှ အိမ်ဖက်သို့ကူးလေ့မရှိ။အိမ်မှာမွေးထားသော ကြောင်တကောင်က အိမ်မှာရှိသောငါးကြော်ကိုချီ၍ တစိမ်းဝင်းခြံထဲလာစားစရာ အကြောင်း လုံးဝမရှိ။ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာပြီး ဝင်ချင်၍သာ ငါးကြော်ကို တဖက်ခြံထဲပစ်ပြီး ကြောင်ကိုလွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် မတင်ရီတယောက် ဘာကြောင့်ဤခြံထဲ ဝင်ရောက်လာသနည်း။အသေအချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ မောင်ထူး အပြင်တွင် သေးပေါက်ထွက်ပြီး ပြန်ဝင်အလာ ဖတ်လက်စအပြာစာအုပ်ကို ဆက်လက်ဖတ်နေစဉ် မှာပင် ဤပူစီမအရေးအခင်းက ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ သူသေးပေါက်ပုံက ပုဆိုးကိုအသားကုန်လှန်၍ ပေါက်ခဲ့မိသည်။
အပြာစာအုပ် တန်ခိုးကြောင့် ရာဂသွေးတွေ တရိပ်ရိပ်တက်ကာ လီးကြီးက အစွမ်းကုန်တောင်မတ်နေသည်။ပြီးတော့ အရွယ်နှင့်မမျှအောင် ကြီးထွား တုတ်ရှည်လွန်းသည့် သူ့လီးက သူငယ်ချင်းတွေကပင် လီးကြီးလွန်းသဖြင့် သူ့ကို တခါ တခါ ‘ မဟာမော်တာ ’ ဟု စကြနောက်ကြသည်။ ပြီးတော့ သူသေးပေါက်နေတာကလည်း တော်တော်နှင့်မပြီး။ ဤအချင်းအရာကို မတင်ရီတယောက် အိမ်သာထဲကကြည့်နေပေလိမ့်မည်။ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်း ခံချင်စိတ်တွေပေါက်လာပေလိမ့်မည်။ပြီးတော့ သူ့ယောကျာ်းကလည်း ခရီးထွက်နေခိုက်ဖြစ်၍ လီးအရသာကို ကောင်းကောင်းကြီးသိထားသော မိန်းမ တယောက်အဖို့ လီးအစာကောင်းကောင်းကြီး ငတ်ပြတ်နေချိန်လည်းဖြစ်၏။ငတ်လျှင် အရှက်ပျောက်ကွယ်မြဲဖြစ်၏။ပြီးတော့ သူဖတ်ဖူးပြီးသော စာအုပ်ထဲကအလိုအရ မတင်ရီမှာ တဏှာရာဂအလွန်ကြီးသော ဟတ္တနီ သင်္ခနီအစပ်မျိုးဖြစ်၏။ အကယ်၍ သူ့လီးသာ စံချိန်လွန်လီးမျိုးမဟုတ်လျှင် သားအရွယ်မျှသာ ရှိနေသော သူ့ကို ထူးထူးခြားခြား စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းမရှိ။ဆင်ကို ဖြုတ်ကိုက် သလိုမျိုးသာ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသို့သော ဖြစ်နိုင်ချေများစွာထဲက ဤဘက်ခြံထဲသို့တိုင်အောင် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်လာခြင်း မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ သူ့ကို အလိုးခံချင်လို့မှတပါး အခြားမရှိတော့ပြီ။ စိတ်သည် လျှပ်တပြက်အတွင်း ကုဋေတသိန်းခန့် ဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိ၏။ ယခု မောင်ထွေးအတွေးနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ ဘာမှကြာသည်မဟုတ်။တဒင်္ဂလေး အတွင်းမျှသာဖြစ်သည်။
“….မြည်…မြည်…ပူစီမ….လာ…လာ… မောင်ထူးရေ….လာပါအုံးဟဲ့…..” မတင်ရီက ကြောင်ကို ခေါ်မရသဖြင့် စိတ်မရှည်ဟန်ဖြင့် ဖင်ဆုံထွားထွားကြီးကို ကော့၍ ယိမ်းနွဲ့လှုပ်ရှားလိုက်ပြီး သူ့ကိုပါ ခေါ်လိုက်သည်။ မောင်ထူးတယောက် ကိလေသာအပူအမြိုက်ခံထားရသဖြင့် အသံပြန်၍မပြန်နိုင်။ သို့သော် ခန္ဓာကိုယ်က မတင်ရီအနားသို့ ရောက်ရှိသွားပြီး သူ့ပုဆိုးကို ကပျာကယာ ချွတ်ပုံလိုက်ပြီး မတင်ရီဖင်ဆုံအကြားနားတွင် ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်သည်။အထိုင်တွင် တောင်မတ်နေသော သူ့လီးတန်ကြီးနှင့်မတင်ရီဖင်ဆုံကြီးတို့မှာ ထိခိုက်သွားသည်။ မောင်ထူးလီးတန်ကြီးနှင့်သူ့ဖင်ဆုံကြီးတို့ ထိခိုက်သွားသည်ကိုထောက်၍ သူမမျှော်လင့် ထားသည့် အခြေအနေသို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ရာ မတင်ရီတယောက်အူမြူးတက်ကြသွား သော်လည်း မိန်းမပီပီ မာယာအလီလီသုံး၍ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်၏။
“…..ပူစီရေ….သမီး….လာ…လာ… မြည်…မြည်….” မတင်ရီတယောက် သူ့ကြောင်မလေးကို အသဲအသန်ခေါ်နေစဉ် မောင်ထူးက ခပ်ဟဟ ဖြစ်နေသော ထမီကိုပင့်လှန်၍ ခါးအထက်ဆီသို့ပို့ပြစ်လိုက်လေသည်။လျှပ်တပြက် အတွင်း မုဆိုးထိုင်ထိုင်၍ တောင်မတ်ကော့လန်နေသော သူ့လီးတန်ကြီးကို အနည်းငယ် ဖိနှိပ်၍ စောက်ဖုတ်အဝနှင့်တေ့ချိန်ကာ တရစ်ခြင်းဖိသွင်းလိုက်သည်။မတင်ရီက အလိုက်သင့်ဖြစ်နေစေရန် ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြုပြင်ရင်း တောင့်ခံပေးထားလိုက်သေး၏။ ဒူးနှစ်ချောင်းကို စုံထောက်၍လိုးခြင်းထက် မုဆိုးထိုင်ပြီးလိုးရသည်က ပိုပြီး လိုးအားရှိကြောင်း မောင်ထူးကြားဖူးထားသည်။အပြာဇာတ်ကားတွေထဲမှာလည်း ဤနည်းမျိုးဖြင့် လိုးတာကို တော်တော်များများတွေ့ဖူးထား၏။မောင်ထူးတယောက် စောက်ဖုတ် မပါဘဲ အသေအချာ လေ့ကျင့်ထားဖူး၏။ ပုံစံက ဘယ်ဖက်ဒူးခေါင်းကို မြေကြီး (သို့မဟုတ်) ကြမ်းမှာထောက်ပြီး ညာဖက်ဖဝါးကို ကြမ်းမှာချ၍ ဒူးကိုတဆစ်ချိုးကွေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ထိုပုံစံအတိုင်း ပြုလုပ်၍ လေထဲတွင် ညှောင့်ကြည့်ရာ အလွန်အားပါလှကြောင်းသိရသည်။ယခု ထိုနည်းကို အသုံးပြု၍ လက်တွေ့လုပ်ခွင့်ရပြီ။ မတင်ရီတယောက် အရိုင်းသက်သက် လူပျိုသိုးလေးမို့ အပေါက်အလမ်း မတဲ့မှာ စိုးရိမ်ပူပန်နေစဉ် မောင်ထူး၏မာကျောထွားကြိုင်းလှသော လီးတံပူနွေးနွေးကြီး က စောက်ဖုတ်အတွင်းသားနုနုတွေကို အရှိန်နှင့်တိုးဝင်ပြီး ဝင်ရောက်လာ၏။ ကာမလျှပ်စစ်ဓာတ်တွေ တဖျင်းဖျင်း တဖျပ်ဖျပ်နှင့်ပွင့်ထွက်လာသည်။
‘အာဂကောင်လေး’ ဟုကျေနပ်စွာ တွေးရင်း မျက်လုံးအစုံမှိတ်၍ ညှစ်ခံသည်။ခါးနှစ်ဖက် ကို ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်၍ အရှိန်နှင့် ဆောင့်သွင်းပြစ်လိုက်ရာ……………. “ ဗြစ်…..ဖွတ်….ဖျစ်….ဖွတ်….ဖစ်….အင့်…အ…အမေ့…ကျွတ်…ကျွတ်….အ…..ရှီး…” မောင်ထူးလီးတံထိပ်ကြီးက သားအိမ်ဝကို ဒုတ်ကနဲပြစ်ဆောင့်သည်။မတင်ရီတယောက် ခါးကြီးကော့တက်သွားပြီး အမလေးတယူရ၏။စောက်ဖုတ်အုံတခုလုံးလည်း ဖျင်းကနဲ ပူထွက်သွားပြီး တကိုယ်လုံး အီဆိမ့်ကျဉ်တက်သွားသည်။ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော မောင်ထူးခမျာလည်း သူ့အရှိန်နှင့်သူ လွန်သွား၍ လချောင်းကြီးတခုလုံး ပူရှိန်းကျင်တက်သွားသည်။တခါမှ မခံစားဖူးသေး သော ကာမအရသာကို ပွဲဦးထွက်ခံစားလိုက်ရ၏။နာကျင်မှုရှိသည့်တိုင် ထိုနာကျင်မှုနှင့် မကာမိသော အလွန်ထူးခြားသည့်အရသာမျိုးဖြစ်၏။တဆုံးထိစိုက်ဝင်သွားသော လီးတန်ကြီးကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်နှုတ်၏။ တဝက်ကျော်ကျော်လောက်ရောက်သောအခါ တဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်သွင်း၏။ဒီတခါ စောစောကလို အရှိန်မပြင်းစေတော့။စောက်ရေကြည်တွေက အဆမတန် စိမ့်ထွက်နေပြီဖြစ်၍ နီထွေးနူးညံ့သော စောက်ဖုတ်အတွင်းသားထဲသို့ လီးတန်ကြီးကို ထိုးနှစ်ပြီး အသွင်းအနှုတ်လုပ်ရသည်မှာ စီးစီးပိုင်ပိုင် ရှိလွန်းလှ၏။
“ဖွတ်…ဖွစ်….ဖွစ်….ဖွတ်….ပလွတ်…ပလွတ်…ဖွစ်….” ပီပြင်ထိမလိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း။သားအရွယ်မို့အထင်သေးခဲ့မိသမျှ အားလုံးပျောက်ကွယ် သွားပြီ။စိတ်နှလုံးဒုန်းဒုန်းချ၍ မောင်ထူး၏ပြင်းထန်ထိမိသော ဆောင့်ချက်တွေနှင့်အညီ သူ့ဖင်ဆုံကြီးကို ကော့ကာကော့ကာ အစွမ်းကုန် ပစ်ပစ်ခံသည်။ “…..ဖွတ်….ဖွတ်……ဖွစ်….ဖွစ်…..ဖတ်…ဖွတ်….ဖွစ်….” တခန်းလုံး လီးဝင်လီးထွက်အသံ။လဥနှင့်စောက်ဖုတ်ရိုက်သံတွေက ဆူညံနေတော့၏။ “ …..အား…အား….အမလေး….အီး…အား…ကျွတ်….ကျွတ်…အမေ့….အား..ကျွတ်…. ကျွတ်…..ရှီး…အား…အ…အင့်….ကျွတ်….ဆောင့်….ဆောင့်….ရှီး…ကျွတ်…ကျွတ်… ဟုတ်ပီ…..အင့်….ဆောင့်…ဟုတ်ပီ….အား…..ကျွတ်….ကျွတ်…..” မတင်ရီတယောက် မျက်လုံးစုံမှိတ်ကာ ကြမ်းပြင်ကို လက်သည်းတွေနှင့် တအားကုတ်ခြစ်ထားသည်။
ခါးကို ညွှတ်ကိုင်း၍ ဖင်ဆုံကြီးကို နောက်သို့ပစ်ကော့ပြီး တကိုယ်လုံးတသိမ့်သိမ့်တုန်ကာ သုတ်ရေပူတွေပန်းထုတ်ပြစ်လိုက်သည်။ အရှိန်နှင့်ဆောင့်နေသော မောင်ထူးလီးတန်ကြီးကို သုတ်ရေပူတွေက ပက်ဖျန်းလွှမ်းခြုံလိုက်သဖြင့် အတွေ့အထိ အငွေ့အားလုံး အကောင်းကြီး ကောင်းလွန်းလှသည်။အတိတ်ကုသိုလ်ကံက ကာမဘုံမှာ ယောကျာ်းသား စစ်စစ်ဖြစ်ရန် စီမံဖန်တီးလိုက်သည့်အတွက်မောင်ထူးခန္ဓာကိုယ်က ကြာကြာစိမ်လိုး နိုင်ရန် စွမ်းရည်သတ္တိတွေရှိနေ၏။မတင်ရီ တချီပြီးသွားသည့်တိုင် မောင်ထူးက မပြီးသေး။ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ပြီး မိန်းမကျမ်းကျေသာ အလိုးပါရဂူကြီးတွေလို အချိန်ဆွဲ၍ အရှိန်နှင့် လိုးနိုင် ဆောင့်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ သုတ်ရေထွက်ခိုက် ကာမဆန္ဒတွေပြည့်ဝ၍ အလွန်အရသာ ထူးခိုက်ဖြစ်၏။မတင်ရီတယောက် ထိုကဲ့သို့ အလွန်ထူးခြားသော ကာမအရသာကြီးကို တမေ့တမူး ခံစားနေစဉ်မှာပင် အလွန်တောင့်တင်းမာကြောလှသော လီးတန်ကြီးက အဆက်မပြတ် မှန်မှန်ကြီး ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေဆဲဖြစ်ရာ ကောင်း၍မှမဆုံးသေးခင် အလွန်ကောင်းသော ဖေါဋ္ဌဗ္ဗ အတွေ့က အသစ်အသစ်ပေါ်လာပြန်သည်။ပူခြင်း ယားခြင်း ကျဉ်ခြင်း ဆိမ့်ခြင်း ဝေဒနာတွေက အားသစ်တွေတိုး၍ တဖန်နိုးကြွလာပြန် သည်။
တဖြည်းဖြည်း ရမ္မက်သွေးတွေက ပူနွေးကြွတက်လာပြန်၏။ ထိုအခါ တဖက်၏ အပြုအမူနှင့်ညီမျှသော တုန့်ပြန်မှုတွေကို အင်တိုက်အားတိုက် ပြုလုပ်လာပြန်၏။ခါးကို ညွှတ်ကိုညွှတ်ကာ ဖင်ဆုံကြီးကို နောက်သို့ ပစ်ပစ်ပြီး အစွမ်းကုန်ခံ၏။ဤကဲ့သို့ အခြင်းအရာအပြုအမှုခြင်း တူမျှစွာ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်ခြင်းပေါင်းစပ်၍ ကာမအရသာကို ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ရယူခံစားခြင်းကို ရှေးဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းအရ မေထုန်မှီဝဲခြင်းဟု ခေါ်ပါသည်။ယခုမောင်ထူးနှင့် မတင်ရီတို့နှစ်ယောက် ကာမသတ္တဝါတို့၏ကာမဓာတ်စာဖြစ်သော မေထုန်မှီဝဲခြင်း ဟူသော ကာမအလုပ်ကို ကြည်ကြည်နူးနူး ရွှင်မြူးတက်ကြွစွာ ပြုလုပ်နေကြသည်။ မတင်ရီကိုယ်တပိုင်းက ခုတင်အောက်မှာ ရောက်နေသည်မို့ နို့အုံကြီးကို ကိုင်ချင်ပါလျှက်နှင့်ကိုင်ခွင့်မသာဘဲဖြစ်နေသည်။မောင်ထူးက အရှိန်မပျက် ဆောင့်ရင်း သူ့လီးတန်ကြီးအရင်းအထိ ကပ်ကပ်သွားစဉ် မတင်ရီ၏ခါးကိုဆုပ်ကိုင်၍ နောက်သို့ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဆုတ်ဆုတ်လာသည်။မတင်ရီကလည်း အလိုက်သင့်ပါပါ လာ၏။အခု မတင်ရီတကိုယ်လုံး ခုတင်နှင့်တပေကျော်ကျော်ခန့် လွတ်ကွာလာသည် မောင်ထူးက သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို မတင်ရီချိုင်းအောက်လျှိုသွင်းပြီး နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆုပ်ကိုင်မည်ပြုရာ မတင်ရီက ကိုယ်ကိုကြွပေးလိုက်၏။သည်တော့မှ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို အားရပါးရ ဆုပ်ကိုင်လျက်ညှောင့်၍ ညှောင့်၍ ဆောင့်ဆောင့်ထည့် လိုက်သည်။
“…ပလွတ်…ဖွတ်….ပြစ်…ပြစ်….ပလစ်…ဖွတ်….ဖွစ်….စွတ်…စွတ်…. ဒုတ်….ဒုတ်…” “…..အင့်..အ….အမေ့….အင့်…အ….အမလေး….အ..အမေ့….အင့်..ကျွတ်..ကျွတ်… ရှီး..အင့်…အ….အား…အ…..” အားပါးလွန်းလှသော ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် လက်နှစ်ဖက်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်ဖိထောက်ပြီး ခါးကိုကော့ကာ ကော့ကာ စုံပစ်ပစ်ခံသည်။ ကာမလျှပ်စစ်လှိုင်းကြီးက မတင်ရီတကိုယ်လုံး နွေးကနဲ ရှိန်းကနဲ ဖြတ်သန်းသွားသည်။တကိုယ်လုံးရှိ အကြောမှန်သမျှ စုလိမ်ရစ်ပတ်ပြီး ဆောင့်ဆွဲလိုက် သလိုခံစားရသည်။ တဆက်တည်း စောက်ဖုတ်တဝိုက်တွင် ရစ်ပတ်ဖွဲ့နှောင်ထားသော ကာမအကြောမှန်သမျှ ဖျင်းကနဲဖြစ်သွားပြီး ဒုတိယအကြိမ်မြောက် သုတ်ရေပူတွေ ပန်းထွက်ကုန်ပြန်သည်။တကိုယ်လုံးရှိ အားအင်တွေကိုစုပ်ယူလိုက်သလို ခံစားရပြီး ငယ်ထိပ်တခုလုံးပူရှိန်းသွားကာ မောင်ထူးလီးတန်ကြီးကို စောက်ဖုတ်ကြွက်သားတွေက အားကုန်ညှစ်ပြစ်လိုက်သည်။မောင်ထူး လချောင်းတခုလုံး ဖျင်းကနဲ ကျဉ်တက်သွားပြီး ဟင့်ကနဲ အင့်ကနဲ တုန်ခါလျှက် လရေပူတွေကို မတင်ရီစောက်ခေါင်းထဲသို့ အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ ပန်းထုတ်လိုက်တော့သည်။ မောင်ထူးက ခါးကို မတ်မတ်ထားလျှက် ခေါင်းကိုမော့ကာ လရေထွက်သောအရသာကို တဝကြီးခံစားနေတော့သည်။
မတင်ရီခမျာလည်း သူ့ပါးပြင်တဖက်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်အပ်ကာ ကာမအရသာထူးကြီးကို ဇိမ်နှင့်ခံစားနေ ပါတော့၏။နှစ်ယောက်သား အတော်ကြာကြာမှိန်းနေကြသည်။လီးတန်ကြီး သိသိသာသာ အရှိန်လျော့သွားမှ မောင်ထူးက ဆွဲနှုတ်လိုက်ပြီး ကျောလည်အထိ ရောက်နေသော ထဘီကို ဆွဲဖုံးပေးလိုက်၏။မတင်ရီကိုလည်း တစောင်းအနေအထား ဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပေးလိုက်၏။ မတင်ရီတယောက် အရုပ်ကြိုးပြတ်ဖြစ်ကာ ဘာမှမလှုပ်ရှား နိုင်တော့။လှုပ်ရှားချင်စိတ်လည်း မရှိတော့။မောင်ထူးက ကြမ်းပေါ်ပုံနေသော သူ့ပုဆိုးကို ကောက်ဝတ်လိုက်၏။ပုဆိုးဝတ်နေခိုက် အောက်သို့ငိုက်ဆင်းကျနေသော လီးတန်ကြီးကို မတင်ရီက မျက်လုံးမှေးစင်းလျှက် ကြည့်လိုက်သေးသည်။
လီးတန်ကြီး က ငိုက်ကျနေသည့်တိုင် လူဝကြီး မာန်ဟုန်မပြေသေးဘဲ ရှိနေ၏။မတင်ရီခမျာမှာတော့ အတော်လေးနွမ်းလျပျော့ခွေနေပြီ။မောင်ထူးတယောက် စိတ်တွေပြန်ထလာပြီး တချီတမောင်းထပ်ဆော်နေလျှင် မတင်ရီတယောက် သူ့အိမ်သို့ပင်ပြန်နိုင်တော့မည် မဟုတ်။ထို့ကြောင့်မထချင် ထချင်နှင့်လူးလဲထလိုက်ပြီး အနားတွင်ထိုင်နေသော မောင်ထူးကို ပုခုံးစောင်းဖြင့်တိုက်ရင်း …………… “…..ဟွန်း….အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် တော်တော်တတ် လူကို အရုပ်ကြိုးပြတ် ဖြစ်အောင်ကို ခံလိုက်ရတာ….” “…မမ…ကလဲ….ခံချင်လို့ တမင်ရောက်လာတာ…..မဟုတ်လား…” စောစောက ဒေါ်ဒေါ်ဟုသုံးမည် စိတ်ကူး၏။မကြာခင်ကမှ ကိုယ်ကဖွတ်ဖွတ်ကျေအောင် လိုးထားတာကို ခံထားရတဲ့ မိန်းမမို့ ‘မမ’ ဟုသာ သုံးလိုက်တော့သည်။ တကယ်အားဖြင့် မတင်ရီသည် တရားဝင်မဟုတ်သည့်တိုင် သူ့မယားတပိုင်းဖြစ်သွား၏။ကိုယ်ကလဲ အလိုလိုပင် သူ့လင်ငယ်ဖြစ်သွားပြီး။ “…..အံမယ်….ခံချင်လို့ရောက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး…နော်…ပူစီမ လာဖမ်းတာ .. ….ဟွန်း သူကသာ လူကို မတရားလိုးတာပါနော်….” မတင်ရီက ဒူးတုတ်ထိုင်လျက်ကပင် ဖရိုဖရဲဖြစ်နေသော သူ့ဆံပင်များကို လက်နှင့်စုပ်သပ်ပြီး ပြင်ထုံးလိုက်၏။ခါးကမတ်ကော့နေပြီး ရင်သားအစုံက အထက်သို့ချီမော့နေသည်။မာန်အကင်းမသေသေးသော မောင်ထူးပေါင်ကြားက လီးတန်ကြီးမှာ တဖန်ကြွတောင့်လာပြန်သည်။အကျီနှိပ်သီး တွေကို ပြန်မတပ်သေးသဖြင့် တင်းပြောင်ဝင်းအိနေသော နို့အုံမို့မို့ကြီးတွေကို အထင်းသား အရှင်းသားမြင်နေရသည်ဖြစ်ရာ လူပျိုသိုး မောင်ထူး၏ရမ္မက်မီးလျှံက တစတစအရှိန်ပြင်းထန်လာပြန်သည်။
မတင်ရီက ကြာမူအပြည့်ပါသော မျက်စောင်းဖြင့် ခပ်ချိုချို ခပ်ဖွဖွလေးထိုးရင်း………………….. “…ဟွန်း…ကြည့်လှပါလားကွာ….ကြာရင်….မမအရည်ပျော်သွားပါအုံးမယ်… အဟင်း ဟင်း….” မကြာမှီအချိန်ပိုင်းကပင် စောက်ဖုတ်အရသာကို ကောင်းကောင်းကြီး သိရှိထားသော မောင်ထူး မျက်လုံးတွေက ရမ္မက်အရှိန်ဖြင့် ဝင်းထိန်လျှက်ရှိပါသည်။ မောင်ထူးအမြင်မှာလည်း မတင်ရီ၏ရမ္မက်ခိုးတွေ ဝေလျက်ရှိသော မျက်လုံးအစုံကို တွေ့မြင်နေရသည်။သူတို့နှစ်ဦး၏ ဖိုဓာတ်၊မဓာတ်တွေက အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ဓာတ်ခိုက်အားပြိုင်လျက် ရှိနေပါသည်။တခါစားဖူးထားသဖြင့် မောင်ထူးတယောက် ရှေ့တဆင့်တိုး၍စားရမှာကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း မရှိတော့ပေ။ မောင်ထူး မတင်ရီအနားသို့ တိုးကပ်သွားပြီး ချိုင်းအောက်က ပွေ့မလိုက်သည်။၂ ချီတိုင်တိုင် ကာမဆန္ဒတွေပြည့်ဝပြီးဖြစ်သော မတင်ရီမှာ တကယ်အားဖြင့် နွမ်းလျနေပါသည်။ထို့ကြောင့် နွားသိုးကြိုးပြတ်ကလေး စိတ်ထမလာခင်မှာပင် အိမ်ပြန်ဖို့ စဉ်းစားထားပြီးဖြစ်၏။
သို့သော် တဏှာရာဂစိတ်က ဆန်းကြယ်လှသည်။ပြန်ချင်စိတ်ရှိသည့်တိုင် တုံ့ဆိုင်းဆိုင်းဖြစ်နေ၏။မခွာနိုင် မခွာရက် ဖြစ်နေသည်။သူမ၏ကာမဆန္ဒကို ပြည့်ဝအောင်ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်သော သည်ကောင်လေး ၏အနားမှ မတင်ရီတယောက် တဖဝါးမှမခွာနိုင်သေးဘဲ သူပြုသမျှ နုရမည့်အခြေသို့ ပြန်ဆိုက်လာပြန်သည်။ “…မမ….ပြန်တော့မယ်ကွာ…..နောက်ရက်တွေ ရှိသေးတာပဲနော်…” နှစ်ကိုယ်ယှဉ်ရပ်မိစဉ် မတင်ရီက ပြောလိုက်၏။ “…အိုဗျာ….နောက်တွေဘာတွေ လုပ်မနေနဲ့…..အခုချိန်က ပဓာနဘဲ…ဘာလဲ… …….. မမက…..မကျေနပ်ဘူးလား….” “…..ဟွန်း…..သူ့….စိတ်ချည့်ပဲ…” မတင်ရီက စိတ်မရှည်သံလေးဖြင့်ပြောရင်း ပုဆိုးအတွင်းမှ ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်နေသော လီးကြီးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆုပ်ရမ်းပြစ်လိုက်သည်။မောင်ထူးက မတင်ရီ ပါးကိုဆွဲမော့ပြီး နီထွေးဖူးရွသော နှုတ်ခမ်းအစုံကို ပြွတ်ကနဲ စုပ်နမ်းလိုက်၏။နွေးထွေး ရှိန်းမြသော ကာမတေဇောဓာတ်က မတင်ရီတကိုယ်လုံး ဖြတ်သန်းသွားသည်။ နှုတ်ခမ်းအစုံကို အားရအောင်စုပ်ပြီးနောက် မတင်ရီကို ခုတင်စောင်းတွင် ထိုင်ခိုင်းပြီး ကန့်လန့်ဖြတ်လှဲသိပ်လိုက်သည်။တန်းလန်းကြီးတွဲကျနေသော ခြေထောက် နှစ်ချောင်းကို ခုတင်ပေါ်တင်ပေးလိုက်ပြီး ထဘီကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ဖင်ဆုံကြီးနှင့် ဖိမိထားသဖြင့် ထမီက ထစ်ခံနေသည်။
“….ဟွန်း….ရှုပ်ကိုရှုပ်တယ်…” .. ဟု ညည်းညူပြရင်း ဖင်ဆုံထွားထွားကြီးဖြင့် ဖိထားသော ထမီကို ကြွပေးလိုက်သည်။မောင်ထူးက ကျေနပ်စွာဖြင့် ထဘီကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် စုံပုံထားလိုက်သည်။ပြီးနောက် ဖြူဝင်းသွယ်လျ နေသော ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဖြဲ၍ ဒူးကောက်ကွေးဆီမှ မကိုင်ပြီး ရင်ဘတ်ဖက်ဆီ တွန်းတင်လိုက်သည်။စောက်ရေတွေဖြင့် စိုရွှဲနေသောစောက်ဖုတ်ကြီးက ဖေါင်းအစ် ပြူးထွက်လာ၏။ဖြူဝင်းသော ဆီးခုံအောက်တွင် စောက်မွှေးတွေက နက်မှောင်ရှုပ်ထွေး နေ၏။ အညိုရောင်သမ်းနေသော နှုတ်ခမ်းသားကြီးနှစ်လွှာက အနည်းငယ် လန်ဟနေသည်။ကျွတ်ထွက်မတတ်ပြူးကြည့်နေသော မောင်ထူးအမူအယာကြောင့် မတင်ရီခမျာ ရင်တွေတလှပ်လှပ်ခုန်နေပါသည်။ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်၍ လိုးပါးဝနေသော မိန်းမဖြစ်သည့်တိုင် အလွန် ပြင်းအားကောင်းလှသော မျက်လုံးတို့ဖြင့်သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို သေသေချာချာ အကြည့်ခံရသောအခါ ရှက်သွေးတွေဖျန်းလာမိသည်။သည်တော့ ဘာရယ်မဟုတ်.. ဂယောက်ချောက်ခြားပြောမိပြောရာပြောလိုက်မိသည်။
“……အင့်…..ဒါပါ….ချွတ်….” နှိပ်သီးတွေပြုထွက်နေသော သူ့အင်္ကျီကို ပုတ်ပြလိုက်၏။မတင်ရီက ငေါ့ပြောမှန်းသိ သည့်တိုင် မောင်ထူးအလွန်ကျေနပ်သွားသည်။မတင်ရီကျောအောက်မှ လက်ပင့်သွင်း မပြီး အကျီကို ချွတ်သည်။ ဖြူဝင်းတင်းမို့ နုထွတ်နေသော နို့ကြီးနှစ်လုံးပေါ်မျက်နှာအပ်ကာ ဘယ်ညာလူးကာ အထပ်ထပ်အခါခါ နမ်းသည်။မတင်ရီတကိုယ်လုံး ယားကျိကျိဖြစ်ကာ မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်ပြီး တခစ်ခစ်နှင့်ဖြစ်နေ၏။သူမလက်နှစ်ဖက်ကလည်း မောင်ထူး၏ခေါင်းကို သိုင်းဖက်ထားသည်။ မောင်ထူးက နို့အုံအရင်းမှ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး နို့သီးခေါင်းတောင့်တောင့် လေးကို ကလေးနို့စို့သလို စို့ပေးပြန်သည်။အခုလို အစို့မခံရသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပြီဖြစ်၏။ကလေးမမွေးခင် ညားကာစလောက်က သူ့ယောကျာ်း၏နို့စို့ပေးခြင်းကို မကြာမကြာခံရဖူးသည်။မတင်ရီတယောက် အလွန်သဘောကျနှစ်ခြိုက်ခဲ့သည်။
အခုလည်း တကိုယ်လုံး တဖြိုးဖြိုးတဖျင်းဖျင်းဖြစ်ကာ ရာဂစိတ်တွေ ပိုကြွလာသည်။ မောင်ထူးက အပြာစာအုပ်တွေ တော်တော်များများ ဖတ်ဖူးထားသဖြင့် လိုးနည်းလိုးဟန် လိုးရမည့်ပုံစံတွေကို မျက်စိထဲမြင်ယောက်ထားပြီးဖြစ်၏။မတ်တပ် ရပ်၍ လိုးဆောင့်ရသည်က ပိုအားရှိကြောင်းသိထားသည်။အခုစာတွေ့ကို လက်တွေ့အသုံးချဖို့ အခွင့်ကြုံလာပြီ။ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို အားရပါးရစုပ်ယက်ဆုပ်ချေပြီးနောက် ကိုယ်ကိုခွာ၍ မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။မတင်ရီ၏ဒူးကောက်ကွေးကို သူ့ပုခုံးပေါ်မတင်လိုက်၏။ အထက်သို့ကော့ထောင်နေသာ သူ့လီးတန်ကြီးကို လက်နှင့်ဖိ၍ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ ဖိနှစ်သွင်းလိုက်သည်။ လီးတန်ကြီးက ၃ လက်မခန့် ဇွိကနဲနစ်ဝင်သွားသည်။မောင်ထူးက ကိုယ်ကို အနည်းငယ်ကိုင်း၍ မတင်ရီလက်မောင်းကြားနှစ်ဖက်အောက် သူ့လက်ကို လျှိုသွင်းပြီး ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို ထိထိမိမိဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ပြီးတော့မှ ကျန်ရှိနေသော လီးတန်ကြီးကို တရစ်ခြင်းသွင်းသည်။
“…..ဖွိ…..ဖွိ….ဖွစ်……ဖွစ်….ဖွိ…ဇွီ…..ဇွပ်…..ဗြစ်…..” လီးတန်ကြီးက စောက်ဖုတ်အတွင်းသားနုနုတွေကို ထိုးဖောက်၍ စီးစီးပိုင်ပိုင် ကြပ်ကြပ်တည်းတည်းကြီး ဝင်သွားသည်။မတင်ရီက မျက်လုံးကို စုံမှိတ်ထားပြီး တိုးဝင်လာသော လီးကြီး၏အတွေ့အရသာကို ဇိမ်နှင့်မှန်းခံရင်း အလွန်အားရကျေနပ် နေသည်။ များသောအားဖြင့် သူ့ယောကျာ်းက လှေကြီးထိုးရိုးရိုးနည်းဖြင့်သာ လိုးပေးလေ့ ရှိသည်။တခါတခါ စိတ်ကူးပေါက်မှသာ လေးဖက်ထောက်လိုးတာမျိုး ရှေ့ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး လိုးတာမျိုးလောက်တော့ရှိ၏။အခုလို ခုတင်ပေါ်ကန့်လန့်ဖြတ် ပက်လက်လှန်ပြီး မတ်တပ်ရပ်လိုးပေးတာမျိုးတော့ မကြုံဖူးသေးပေ။ ပုခုံးကို လက်နှင့်ထိထိမိမိ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဖိထောက်ထားသည့်အတွက် လီးတန်ကြီးက သားအိမ်ဝအထိဆိုက်လာသည်။မောင်ထူးက ဖင်ကြောကြီးကို အစွမ်းကုန်ရှုံ့၍ ကိုယ်ကိုအနည်းငယ်နောက်ဆုတ်ကာ လီးတန်ကြီးကို ပြန်နှုတ်သည်။
ပြီးတော့ တရှိန်ထိုးဆောင့်သွင်းသည်။ အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် သားအိမ်ဝကို ဒုတ်ကနဲ ဒုတ်ကနဲ ဆောင့်သောဒဏ်ကြောင့် မတင်ရီတကိုယ်လုံး မီးပွင့်မတတ် ခံစားလိုက်ရပြီး ကော့တက်သွား၏။သူမလက်နှစ်ဖက် က မောင်ထူးလက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို ယောင်ရမ်းပြီး ဆုပ်ကိုင်လိုက်မိသည်။ ဒူးကောက်ကွေးက မောင်ထူး ပုခုံးပေါ်တင်ထားရသဖြင့် တကိုယ်လုံး အချုပ်ခံထားရသလိုဖြစ်စေ၏။အသွင်းအနှုတ် လေးငါးဆယ်ချီခန့် ပြုပ်လုပ်ပြီးသော အခါ မောင်ထူးက အရှိန်နှင့်ဆောင့်ပါတော့သည်။ဆောင့်ချက်တွေက ကြောက်ခမန်းလိလိ ပြင်းထန်ပြီး အားပါသဖြင့် မတင်ရီကလည်း မျက်လုံးစုံမှိတ်လျက် အံကြိတ်ပြီး ခံသည်။
“…..ဖွတ်…ပလွတ်…..ဖွတ်…..ဗြစ်….ဒုတ်..ဖွတ်….အား..အ…အား…အမေ့…ရှီး… …..အီး…အ…..အမေ့….အမေလေး…..အီး…ရှီး….အား…အ……” မတင်ရီကလည်း ရှိသမျှအားကုန်ထုတ်ကာ မောင်ထူးဆောင့်ချက်နှင့်အညီ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကော့ကော့ခံသည်။ဖွတ်ဖွတ်သံ အီးအားသံတွေက တခန်းလုံး ပွက်လောက်ကိုညံနေ၏။လူပျိုးသိုးပီပီ အလွန်သန်မာလှသော အင်အားတွေနှင့် တဖွတ်ဖွတ် တဇွိဇွိ ဆောင့်လိုးနေရာမှ …………. “….မမ…..ကောင်းလား ဟင်…..” မတင်ရီတယောက် အကောင်းကြီးကောင်းနေသဖြင့် မောင်ထူးအမေးကို တော်တော်နှင့်မဖြေနိုင်။တော်တော်ကြာမှ….. “…..အင့်….အမေ့….ကျွတ်….ကျွတ်…..ကောင်း….ကောင်း….တယ်ကွယ်….” “ပြိုင်တူပြီးလျှင် ကောင်းနိုင်ပါသည်။” ပြီးပါပြီ
မျှတ တဲ့ အပေး အယူ